Khin Maung Chin: လွမ်းလိုက်တာအရိပ်လေးရယ်
05 June 2011 8:32 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ကျနော့်ဘဝမှာ မထင်မှတ်တာတွေဖြစ်ဖူးကြုံဖူးပေမယ့် လတ်တလောကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုတော့ဒီတစ်သက်မေ့နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ.
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းခေတ်ကလည်း Globalization ခေတ်လို့ပြောနေကြတဲ့
ခုနေခေတ်ကြီးထဲမှာ လူငယ်ကလည်းဖြစ်ပြန်.. အချစ်ဆိုတာကိုလည်းကိုးကွယ်တတ်သူမို့ နိုင်ငံတွေဘယ်လောက်ဝေးဝေး နီးနေစေတဲ့အွန်လိုင်း Communication ကနေတဆင့်..........
အဲလိုပေါ့ဗျာ.. တိုးတက်လာတဲ့ Communication တွေကတဆင့်ကျနော်ဟာအချစ်ဆိုတာ
ယောကျာင်္းလေးပဲလား၊ သူပြောနေသလိုမိန်းကလေးပဲလား၊ ဖြူသလား၊ မဲသလား၊
ပိန်သလား၊ ဝသလား..။။ ဒါတွေဘာတစ်ခုမှမသိရသေးပါဘူး..။ ဒါတွေမသိပဲနဲ့ကိုယ့်ချစ်သူလို့ဘာလို့ပိုင်စိုးပိုင်နင်းပြောတာတုန်းလို့ မေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော့်မှာအဖြေပေးစရာတိတိကျကျမရှိပါလို့ဖြေရမှာပါပဲ..။
သူလက်ခံခံ၊မခံခံ ကျနော်ကချစ်နေမိတာမို့ ကျနော့်ချစ်သူလို့ကျနော်ပြောဆိုသုံးနှုန်းလိုက်တာပါ..။ သူနဲ့ပတ်သတ်လို့ အတိအကျကျနော်သိတာကတစ်ခုထဲရယ်...အဲဒါကတော့ သူမြန်မာပြည်မှာလက်ရှိနေနေတယ်ဆိုတာပါပဲ...
ဒီ့ထက်ပိုပြီးကျနော်ဘာမှမသိပါဘူး..။ မေးလည်းမမေးမိပါဘူးဗျာ..။ တနေ့ကိုအလုပ်ခြောက်နာရီပဲလုပ်ရတဲ့ကျနော့်မှာ အချိန်ပိုတော်တော်များများရှိနေတတ်ပါတယ်...
ဒါပုံသေတော့ာမဟုတ်ဘူးပေါ့.. များသောအားဖြင့်ပါ.. ။
ထူးထူးဆန်းဆန်းဖေ့စ်ဘွက်သိပ်မသုံးဖြစ်တဲ့ကျနော် သူငယ်ချင်းလည်းများများစားစားမရှိပါဘူး..။ အဲဒီနေ့ဖေ့စ်ဘွက်ဖွင့်လိုက်တော့ကျနော့်ကိုလာ Add ထားတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့တိုးတော့တာပါပဲဗျာ.. ဒါနဲ့ကျနော်လည်းဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး..
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရတော့ပိုကောင်းတာပေါ့၊လို့တွေးပြီး လက်ခံလိုက်တယ်လေ..။ အလုပ်အဆင်မပြေလို့ကျနော်စိတ်တိုနေတဲ့အချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတာပေါ့..။
ခင်မင်မှု့က လေးနက်သထက်လေးနက်လာပြီးထုံးစံအတိုင်း ကျနော့်ဖက်ကပဲချစ်ခွင့်ပန်လိုက်တော့တာပါပဲဗျာ..။
သူငယ်ချင်းနည်းပါးတဲ့ကျနော်နဲ့သူငယ်ချင်းလုံးဝမရှိပဲအိမ်ကြီးထဲမှာသာ အမြဲနေရရှာတဲ့သူနဲ့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ပေါ့..။ဒီတော့လည်းဂျီတော့ဆိုတာက မြှားနတ်မောင်ပဲဖြစ်နေသလိုလို.။
ဟာဟ.. အလုပ်ကပြန်လာတာနဲ့တန်းပြီး (အရင်ကတော့အွန်လိုင်းသိပ်မတက်ဖြစ်ပါဘူး) ဂျီတော့ဖွင့်ထားလိုက်တော့တာပဲ..။
သူတော့မသိဘူး..။ အပိုအလုပ်လို့မြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ကျနော်တောင် Chatting ဆိုတာကြီးကို တော်တော်ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်ဗျာ.. အဲ..ပြောစရာကအခုမှရောက်လာတော့တယ်.. အဲဒီလိုကျနော်ဖွင့်ပြောပြီးတဲ့နေ့ကတည်းက သူအွန်လိုင်းကိုမတက်လာခဲ့တော့တာဒီနေ့အထိပဲဗျာ..။
''ko shwe chin gyi ! shin I ko wait nay par naw !
shin, si ko I pyan lar khe' pa, mae...
sate shay shay nae' khalay lay ko wait pay par lu kyi yal.
pyan lar hma I shin, ko arr lone shin pya pa mae..
shin, ko ayann miss nay tal ko shwe chin gyi yal....'' တဲ့...။
သဘောကတော့ကျနော့်ကိုလွမ်းနေပါတယ်..ဒါပေမယ့်ကိစ္စလေးတွေအရေးတကြီးပေါ်လာလို့ အွန်လိုင်းမတတ်ဖြစ်တာကို စိတ်မဆိုးပဲ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်နေပါ
ဖူးစာမှာရှိရင်တော့ သူနဲ့ပြန်ဆုံရမှာပဲလေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးရင်း ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးပို့ပေးလိုက်တယ်ဗျာ.... ဆိုင်မဆိုင်မသိပေမယ့်အဲဒီအချိန်က ကျနော့်ရင်ထဲကထွက်အန်ကျလာတာတွေကို ကဗျာတစ်ပုဒ်အဖြစ်အသက်သွင်းလိုက်တာကို သူငယ်ချင်းတို့ကိုဝေမျှချင်လို့ ခုလိုရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြောပြနေရတာပါ..... ..
ပြန်မတွေ့သေးပါဘူး။ စာရေးထားတာကိုပြောပြတာပါ..။ အရမ်းငိုမိတယ်တဲ့ဗျာ..။
ကျနော်လည်းမျက်ရည်တွေစိုနေအောင်အထိ ရင်မှာဆို့တင်းပြီး ရေးထားခဲ့တဲ့ကဗျာလေးပါလို့
''သူသတိရရ မရရပေါ့.. ကျနော်ကတော့မေ့လို့မရပါဘူး''
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ကဗျာ3ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jun 5, 2011, 9:03:00 PM
Jul 8, 2011, 8:38:00 PM
ဒီပိုစ့်လေး အရမ်းကြိုက်တယ်.. ခံစားချက်ကိုလည်း ထပ်တူနားလည်နိုင်တယ်.. ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကန်ဒီချစ်သူနဲ့လည်း onlineမှာ စသိတာ.. ရုပ်မမြင်ဘူးသေးခင်ထဲက သံယောဇဉ်တွယ်တာပေါ့.. အစ်ကို့လိုပဲ.. အစ်ကိုနဲ့မတူတာတစ်ခုက ကန်ဒီတို့က happy ending လေ.. ခုဆို သူနဲ့သိတာ ၅နှစ် ချစ်သူဖြစ်တာ ၃နှစ်ရှိပြီ.. အစ်ကို့ကောင်မလေးနဲ့လည်း ပြန်ဆုံဆည်းနိုင်ပါစေလို့.. ^^
Jul 9, 2011, 5:57:00 PM
ခုလိုထပ်တူနားလည်ပေးတာဝမ်းသာစွာကြိုဆိုပါတယ်ညီမငယ်..။ ညီမငယ်တို့ရဲ့Happy Endingအတွက်လည်းCongeratulationပါဗျာ. လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သံယောဇဉ်ဖြစ်တည်တယ်ဆိုတာထင် သလောက်လည်းမလွယ်တာမို့ညှိတွယ်လာ ကြပြီဆိုရင်တော့ ပြန်မပျက်စီးသွားအောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်၊တန်ဖိုးထားရမယ်လို့ခံယူထားတဲ့ သူမို့ပိုနာကျင်မိတာပါ..။ကျေးဇူးပဲညီမငယ်...။အရာရာအဆင်ပြေပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်.။ (ခင်မင်စွာဖြင့်)
♦♦ ကျွန်တော်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဘလော့များ ♦♦
bad-ass, wicked, deadly, sick (အသုံးများသော ဗန်းစကားများ)
Mc w@i y@n!
♦♦ ♦♦ ♦♦ သတင်းစုံကဏ္ဍလေးပါ ♦♦ ♦♦ ♦♦
♦♦ ♦ ♦ ♦♦ နည်းပညာအကူအညီ ♦♦ ♦ ♦ ♦♦
♦♦ ITN ♦♦
♦♦ M-I-P-T ♦♦
♦♦ ကိုခင်မောင်စိုး ♦♦
♦♦ ကိုခွန်မောင်ပန် ♦♦
♦♦ ကိုပညာ ♦♦
♦♦ ကိုဖိုးသား ♦♦
♦♦ ကိုရန်အောင် ♦♦
♦♦ ကိုအလွမ်းအိမ် ♦♦
♦♦ ကိုကေပီသရီး(မိသားစု) ♦♦
♦♦ ကိုဇော် ♦♦
♦♦ ကိုနေမင်းမောင်မောင် ♦♦
♦♦ ကိုဝေမင်းလျှံ ♦♦
♦♦ ကိုဖြိုး ♦♦
♦♦ ကိုကြီး ♦♦
♦♦ ညီလေးနေဇော်လင်း ♦♦
♦♦ ပုသိမ်သားလေးကိုဖြိုးဝေ ♦♦
♦♦ ဘဝသစ် ♦♦
♦♦ မိုးထက်မြင့် ♦♦
♦♦ အဖြူရောင်လေး ♦♦
♦♦ မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) ♦♦
♦♦ မောင်စေတနာ ♦♦
♦♦ မြိုင်မြို့သားလေးကိုစိုးဝင်းနိုင် ♦♦
♦ မြန်မာဘောလုံးချစ်သူများဆုံဆည်းရာ....သို့ ♦
♦ ♦♦ ♦ ♦♦ မြန်မာအီးဘွက်များဖတ်ရန် ♦♦ ♦ ♦♦
♦ ♦♦ ♦♦ ဆော့ဖ်ဝဲပဒေသာပင်........သို့ ♦♦ ♦♦ ♦
♦ ♦♦ ♦♦ ♦ အိပ်မက်များ...........သို့ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦
♦ ♦♦ ♦♦ ♦ အရိုင်းပန်း...............သို့ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦
♦♦ ♦♦ ♦♦ အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် ♦♦ ♦♦ ♦♦
♦♦ ♦♦ ♦♦ မဂ္ဂဇင်းကဏ္ဍလေးပါ ♦♦ ♦♦ ♦♦
The Face မဂ္ဂဇင်း
♦♦ ♦♦ မြန်မာသီချင်းနားထောင်ရန် ♦♦ ♦♦
♦♦ ♦♦ မြန်မာရုပ်ရှင်များကြည့်ရန် ♦♦ ♦♦
SHOUTBOX WIDGET, VIP Bonus, metatrader, Amiga forex, How to win roulette